Dib U Eegid : Mohamed Salah Oo Isku Qoray Taariikhda Champion-ka Liverpool – Kooxda.com
Home 2018 April Dib U Eegid, Wararka Maanta Dib U Eegid : Mohamed Salah Oo Isku Qoray Taariikhda Champion-ka Liverpool
Dib U Eegid : Mohamed Salah Oo Isku Qoray Taariikhda Champion-ka Liverpool
April 24, 2018 · by	Osman Hassan Ali · 0
Mohamed Salah iyo Firminho ayaa guul weyn ku hogaamiyay kooxda Liverpool waxa ayna hal lug uu u giliyeen finalka tartanka Champion-ka ka dib guul ay ka gaareen kooxda Roma oo marti ugu aheyd qalcadda Anfiled .
Waxa ay ku garaacene 5 gool iyo laba xilli Firminho uu lahaa laba gool halka midna uu lahaa Mane , waxaana dhinaca Roma u dhaliyay Dzeko iyo Diego Perotti waxa ayna kala yimaadeen daqiqiadihii 81-aad iyo 85-aad ee dhamaadka ciyaarta
Salah ayaa Liverpool u dhaliyay laba gool qeybtii hore ee ciyaarta kuwaasi oo kala yimid daqiiqadihii 36-aad iyo 45-aad .
Salah ayaa haatan sidaas ku leh 10 gool oo Champion-ka ah xili ciyaareedkaan xilli guud ahaan uu xilli ciyaareedkaan uu dhaliyay 42 gool dhamaan tartamada ay Liverpool ku jirto .
Haatan , kaliya waxaa Salah ka sareeya laacibkii hore Liveropool ee Ian Rush kaasi oo xilli ciyaareedkii 1982/1983-dii dhaliyay 47 gool halka Salah uu sidoo kale bar bareeyay Roger Hunt oo xili ciyaareedkii 1961/1962-dii dhaliyay 42 gool hal xilli ciyaareed dhamaan tartamada .
Sidoo kale Salah ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay ee Liveropol oo 5 kulan isku xigts Champion-ak ah soo taabta shabaqa xilli sidoo kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay ee qaaradad africa ah oo hal xilli ciyaareed gudihiisa Champion-ka kaga dhaliya 10 gool .
Filed in: Dib U Eegid, Wararka Maanta